I-Meizu 16 kunye ne-16 Plus zidlula kwi-TENAA: ezona zinto ziphambili zityhilwe | I-Androidsis
I-Meizu 16 kunye ne-16 Plus, I-duo elandelayo yeflegi yenkampani yaseTshayina, yenza nje ukubonakala kwangoko kwi-TENAA, isiqinisekiso saseTshayina, apho basibonisa khona uyilo kunye nokubalulwa okuthile kweempawu kunye neempawu esele zihletywe ngaphambili, kodwa eziyinyani ngoku.
Ezi zixhobo zimbini zokusebenza okuphezulu Ziya kuboniswa ngesimbo nge-8 ka-Agasti. Ukongeza, ngokokulindelwe kakhulu nguJack Wong, umphathi we-Meizu, baya kuphumelela kwintengiso ngaphandle kwengxaki.
Ii-smartphones zibhalisiwe kwiziko ledatha le-TENAA phantsi kweenombolo zemodeli M882Q y M892QIikhowudi zeMeizu 16 kunye ne-16 Plus ngokulandelelana.
Meizu 16 kwi-TENAA
Njengoko sibona, Uyilo olusetyenzisiweyo luyafana nolweMeizu 15, apho inciphise khona imiphetho kwicala ngalinye kumacala ayo, ngaphezulu kwayo nantoni na emacaleni, ithatha indawo ephambili ngaphambili. Ngasemva, zombini iifowuni zinezinto ezimbini ezibekwe ngokuthe nkqo ukuseta ikhamera ecaleni kwesibane se-LED, kodwa abanasifundi seminwe kanye njengoko bekutshiwo, njengoko sinokudityaniswa phantsi kwescreen.
Ngokwenye idatha, iMeizu M882Q (16) inesikrini esine-intshi ezi-6 kunye nezindlu zebhetri eyi-2.950mAh. Ubukhulu bayo buyi-150.5 x 73.2 mm. Kwelinye icala, I-Meizu M892Q (16 Plus) ine-6.5-intshi yesikrini, Ubungakanani bebhetri ye-3.750mAh kunye nemilinganiselo ye-160.3 x 78.2 mm. Ukongeza koku, ezi fowuni zimbini zinobunzima obucekeceke be-7.3mm.
Meizu 16 Plus kwi-TENAA
Ekugqibeleni, Ezi fowuni kulindeleke ukuba zifike nge-18: 9 factor ratio AMOLED shows, kunye neQualcomm Snapdragon 845 ukuya kuthi ga kwi-8GB ye-RAM. Nangona kunjalo, kuya kufuneka silinde idatha esemthethweni eya kuthi inikwe ngosuku lokunikezelwa kwayo ukuze siphume kwintelekelelo kunye nengqikelelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Meizu 16 kunye ne-16 Plus zidlula kwi-TENAA: iimpawu eziphambili zibonisiwe